BEERALAYDA REER POLISH AYAA BILAABAY INAY KA SOO HORJEESTAAN ​​TALLAABOOYINKA MAAMULKA. DIBAD-BAXA AYAA LOO MAGACAABAY "DHISMAHA CUSUB EE CUSUB" - MAQAALLO
Beeraleydu waxay bilaabeen inay joojiyaan wadooyinka caalamiga ah, jidadka tareenka, si ay u noqoto masuuliyiinta Polish, oo ay ku jiraan madaxweynaha Jamhuuriyadda, Andrzej Dudu, oo ka jawaabay codsiyada iyo dibad-baxyada beeralayda.
Kooxaha beeraha ayaa ka muuqday waddooyinka, gaar ahaan degmooyinka Wielkopolska, Lublin, Podlaskie iyo Lodz. Weerarradu waxay bilaabeen sababtoo ah dareen la'aanta beeraleyda ah in maamulku aysan taageerin ganacsiyada beeraha ee yaryar ee Poland iyo soo kordhinta wax soo saarka beeraha ee dalalka kale, intooda badan oo ka yimid Ukraine. Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha, isaga oo iska indha-tiray ficilkan dib-u-dhacaas wuxuu horseedi karaa burburinta awoodda xisbiga ee awoodda, iyo sidoo kale in laga adkaado.
Qabanqaabiyeyaashu waxay si kama-dambayn ah u maamulaan mas'uuliyiinta dalka taas oo su'aal ahaan loo xalin lahaa ka hor 6-da Febraayo. Haddii kale, beeralaydu si bareer ah u abaabulaan "wareejinta Warsaw" oo nuqul ka sameysma dhacdooyinka horumarinta dhacdooyinka Faransiiska "jaale huruud ah", taas oo sababtay kororka rabshadaha ballaaran ee ka dhacay dawladda bishii November ee sannadkii hore.
Isla mar ahaantaana, magaalada Sjorda-Velikolskaya, oo ah ficil diineed oo tikniko ah oo ku saabsan "dhimashada beeraha ee Poland" ayaa la qabanqaabinayaa.